Magaalada baardheere ayaa waxaa ka soconaya hoolgal ay sameenayaan ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM – STAR FM SOMALIA
Magaalada baardheere ayaa waxaa ka soconaya hoolgal ay sameenayaan ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, ciidamada Dowladda Federalka Somaliya iyo kuwa Amisom ayaa saaka howlgal waxa ay ka wadaan Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Howlgalkaan ayaa waxa uu yahay mid ballaaran oo ciidamada ay ka wadaan Magaalada gudaheeda, waxaana Xaafadaha qaar howlgalka uu yahay mid guri guri ah oo baaris adag ay ka socoto.
Ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda ayaa galaya xaafadaha qaar ee Magaalada Baardheere oo baaritaanada ay ka socdaan, inkastoo ilaa hada aanan la soo warin dad howlgalkaasi lagu qabtay.
Isgaarsiinta Magaalada Baardheere ayaa hawada laga saaray, iyadoo Saraakiisha xalay saqdii dhexe ay ku amreen Shirkadaha Isgaarsiinta inay hawada ka saaraan.
Guud ahaan Degmada Baardheere iyo tuulooyinka hoostaga degmadaasi saaka kama jirto wax Isgaarsiin ah, taasi oo saameyn ku yeelatay dadka shacabka ah.
Howlgalka ayaa sidoo kale la sheegayaa ciidamada inay ka wadaan duleedyada Magaalada Baardheere.
Saraakiisha ciidamada Dowladda ayaa dhawaan waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen saddex gaari oo ay lahaayeen Shabaab, kuwaasi oo laga soo qabtay deegaano hoostagga Degmada Baardheere, kadib markii ciidamada ay heleen macluumaad ku saabsan gaadiidkaasi.
Ilaalada Hotelka Wehliye ayaa qabtay sadex nin oo midkamid watay jalbaab iyo indho shareer
Wasiirka Amniga maamulka Galmudug ayaa Tababar u soo xiray in ka badan 80-askari